Ukuqinisekiswa kwekhwalithi - iSaky Steel Co., Ltd
Ikhwalithi iyingxenye ebalulekile ye-SAKY STEEL Business Principles. Umgomo wekhwalithi usiqondisa ukuletha imikhiqizo nezinsizakalo ezidlula okulindelwe amakhasimende futhi ezihlangabezana nazo zonke izindinganiso. Lezi zimiso zisisizile ekutholeni ukuqashelwa njengomthengisi othenjiwe kumakhasimende emhlabeni jikelele. Imikhiqizo ye-SAKY STEEL ithembekile futhi ikhethwe ngamakhasimende emhlabeni jikelele. Lokhu kwethembela kusekelwe esithombeni sethu sekhwalithi nedumela lethu lokuletha ngokungaguquki imikhiqizo esezingeni eliphakeme.
Sinezindinganiso zekhwalithi eziyimpoqo eziqinile lapho kuqinisekiswa khona ukuhambisana ngokuhlolwa okuvamile nokuzihlola kanye nokuhlolwa okuvela eceleni (i-BV noma i-SGS). Lawa mazinga aqinisekisa ukuthi senza futhi siphakela imikhiqizo esezingeni eliphakeme futhi ehambisana nomkhakha ofanele kanye namazinga wokulawula emazweni esisebenza kuwo.
Ngokuya ngesicelo esihlosiwe kanye nemibandela yokulethwa kwezobuchwepheshe noma ukucaciswa kwamakhasimende, kungenziwa izivivinyo ezahlukahlukene zokuqinisekisa ukuthi kugcinwa amazinga aphezulu kakhulu. Imisebenzi ihlonyelwe imishini yokuhlola ethembekile neyokulinganisa yokuhlola okonakalisayo nokungonakalisi.
Zonke izivivinyo zenziwa ngabasebenzi bekhwalithi abaqeqeshiwe ngokuhambisana nemihlahlandlela yohlelo Lokuqinisekiswa Kwekhwalithi. Ibhukwana elibhalwe 'Ikhwalithi Yokuqinisekisa Ikhwalithi' lisungula umkhuba ophathelene nale mihlahlandlela.
Isivivinyo se-Handle Spectrum
Ukuhlala ithuluzi lokubukisa
Isivivinyo Sokwakhiwa Kwekhemikhali ye-CS
Ukuqina kwe-HB Testing
Ukuqina Ukuhlolwa kwe-HRC
Ukuhlolwa kwe-Intergranular Corrosion
Export Umnyango A:
Ifeksi: 0086-21 51026334
Imibuzo mayelana nemikhiqizo yethu noma pricelist, sicela ushiye ikheli lakho kithi thina sizothintana ngaphakathi 8 amahora.